Kungani i-Windows 7 nesibaya play, yini okufanele uyenze?
Cabanga ufika ekhaya ngemva zokusebenza noma esikoleni ngosuku isikhathi eside futhi kanzima futhi ufuna uphumule. Qalisa ithoyizi zakho ozithandayo noma nje i-movie. Kodwa kuyini na? Iwindi isicelo ngokwalo lincishisiwe ukuba ugqoko ... wena phaka Ingase iphendule ngokungabi nasithakazelo, futhi baqhubeka nomsebenzi wakhe, kodwa ngemuva kwemizuzu engu-2-3 kwenzeka futhi. Isimo iqala ukuba nzima. Kuthiwani uma umdlalo njalo lwawela phezu kwabantu Windows 7? Ake sibheke izixazululo kungenzeka le nkinga.
Ngakho, ugoba umdlalo ku-Windows 7. Yini okufanele ngiyenze? Ungethuki singene wilds ubuchwepheshe IT. Inketho elula - kuba inkinga ikhibhodi. Ngokwesibonelo, adlala umdlalo okuyinto abaphikisi kudingeka ukwaba Tab ukhiye. Uma Alt ezimqoka wena Ngishoné, umdlalo uyovele ikhishiwe uma usebenzisa le nhlanganisela. Isixazululo sale nkinga isobala - ukuhlanza ikhibhodi. Mhlawumbe-ke kuyodingeka ukuba ukushintshwa. Yiqiniso, ngaphambi esikhundleni kuwufanele usuhamba - ukusebenzisa umdlalo bese ucindezela Tab, ozosigingqela uma kungenjalo, khona-ke funa inkinga kumele kube kwenye indawo.
Yiqiniso, akubona bonke kamnandi kangaka njengoba kungase kubonakale efika kuqala. Ngezinye izikhathi isizathu sokuthi kungani Windows 7 nesibaya mdlalo iyiphi enye inqubo esiqukethe control. Lokho kuyinto ebaluleke ephakeme.
Ngokwesibonelo, uma unayo i unqulo wesi arab kuphela ifakiwe, kungase uzame okwazisa ukutheleleka noma ukungakwazi ukuba afeze isenzo nanoma iyiphi into ngenkathi kokuhlola amafayela. Kulokhu, udinga ukuthola ukukhubaza iphazamise inqubo. Uma nje isicelo, isibonelo, isidlali somculo egijima ngemuva, khona-ke kufanele uyivale, uma igciwane, singakwazi kumvimbe ukuthumela uqaphela, khona-ke ngeke sisaba ukuvala umdlalo.
Iqhubeka isihloko anti-virus, kuyafaneleka kokukhuluma kakhulu ukutheleleka. Ngokuphelele hlola PC yakho amagciwane, okungcono esebenzisa eziningana ezahlukene. Imisebenzi amagciwane kuyahlukahluka kangangokuthi kuvele kufane nokudlala kungaba inkathazo ukuthi ngokukhethekile icishe amafasitela, futhi yimuphi omunye igciwane engenela control PC imidlalo yakho.
Esinye isizathu esenza Windows 7 nesibaya umdlalo - le software update, alande yolwazi ehlukene kanye izibuyekezo kokufaka. Ngokuvamile, lezi zinqubo benze umsebenzi wabo noma ngokuphelele okubonakalayo kumsebenzisi, noma akwazisa kuye isheke ihlelelwe izibuyekezo. Nokho, abanye abathengisi software abakaze bacabange ngempela lula umsebenzisi, futhi izinqubo ukuze uhlole izibuyekezo, eqinisweni, ukuze sifeze lesi senzo esithathiwe e zabo "izandla" eziyisisekelo computer imithombo.
Isibonelo imikhiqizo efana eliphansi kungaba ngokuphelele zonke modems Inthanethi. Ikakhulukazi, isofthiwe yabo yakhelwe ukusebenza nabasebenzisi. Kungaba njengenhlangano izilungiselelo uhlelo ezengeziwe, futhi i-akhawunti yomsebenzisi siqu. Ngokwesibonelo, MTS-Umqhubi uxhumano ukuqala ouc.exe inqubo ukuthi uhlola izibuyekezo njalo ngemva kwemizuzu engu 10-15. Isixazululo sale nkinga ilula - ukususa zonke izinhlelo ezihlobene nomsebenzi we-imodemu, izosebenza ngaphandle kwabo, kanye ukwenqatshelwa elicacisiwe inqubo sokuqalisa.
Enye ikhambi lenkinga, ukuthi kungani i-Windows 7 Songa umdlalo kungaba ukuhlola abashayeli ifakiwe kukhompyutha yakho. Iqiniso liwukuthi uma ungazange efakwe isofthiwe imishini, bese, isibonelo, uma uxhuma-headphone kuya laptop, it uzozama ngokuqhubekayo, ngokuphindaphindiwe ukufaka abashayeli. Lokhu kuyoholela emithethweni zonke izinqubo iphinde ivimbele ukuba usebenze.
Ngaphezu kwalokho, izinkinga ezifanayo kungenzeka ngenxa ukushayisana abashayeli isiqophi ikhadi futhi uhlelo lokusebenza. Zama ukususa hhayi umshayeli, kanye "esilawula", isibonelo, ATI Control Centre.
Kunoma yikuphi, ngisho noma kungasizi, kuba njalo kuyasiza ukuba kukhompyutha yakho abashayeli ezintsha. Download isofthiwe Driver Ukulekelela kanye njalo ngosizo yayo afeze isibuyekezo umshayeli ngesandla kunokuba usebenzise "izikhungo" ezahlukene, bese awusoze abe umbuzo othi, "Kungani i-Windows 7 emphethweni umdlalo?"
Njengoba "windose 7" zihlanganisa BIOS nibuke nemingcele main nezilungiselelo
Anazi ngisho bazi ukuthi i-computer yakho
Indlela ukubiza umugqa wemiyalo: amacebiso awusizo
Ultrasound webele: kunoma iyiphi usuku umjikelezo ezinqunyiwe?
Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka beats Binaural
Yini izinto lula ukuthatha phezu Oge? izinto Kuyadingeka ukulethwa jeg
Tulips buphelile. Yini sezimbali?